EMBONA SENDRA NANDALO
Mitodika ny fotoana lasa,
Hibanjinana ny ho avy.
Ao an-tsaina ny taloha.
Toa ny vao omaly anefa,
Eo daholo ny mpianakavy ;
Na ny mbola eto an-tany,
Na ireo efa lasa nialoha.
Ny fotoan'ny fahazazana,
Mbola tena bitika ny tena.
Nilalao sy nihazakazaka,
Eny an-tanàna rehetra eny ;
Misy ny fotoana, voantso,
Voahiraka ho any an-tsena.
Nisy koa ireo zava-maro,
Nahafaly, na nahasorena.
Nandeha teny ny fotoana,
Dia nirosoana ny fianarana.
Dia niezaka nilofo, nihoitra,
Fa sao mba ho nety ihany.
Nivoaka maraina sy hariva,
Tsy mba fotsy varavarana.
Fa ny tanjona nokendrena,
No hany nobanjinina hatrany.
Nihalehibe ny tena, nahafaly,
Nandeha tsara izay natao ;
Nisy ihany anefa ny andro,
Ny fotoana maro nanahirana.
Tsy natao olana nampijaly,
Fa fanohitra entina nanavao
Ilay tanjona any amparany,
No kajiana tsara tsy hivilana.
Ny tena fahombiazana anefa,
Tsy ny fahatafitana ihany ;
Fa ny fiezahana, filofosana,
Ahatratrarana ny asaramanitra ;
Dia ny fananana tokantrano,
Taranaka mendrika hatrany ;
Eo ambany ny fiahian’i Ray,
Sy Jesoa Kristy any an-danitra.